US: Isdhexgalka Soomaalida iyo shucuubta kale - BBC Somali
US: Isdhexgalka Soomaalida iyo shucuubta kale
Somalida ku nool gobolka Minnesota ee wadanka Maraykanka, ayaa sanadihiii ugu danbeeyay waxa dadbadani dagayeern magaalooyina yaryar ee ka dururgsan magaalooyinka waawayn ee Minneapolis iyo St.pual oo ay haray u dagijireen.
Somaalida, ayaa magaalooyinkaasi ee ay dageen ka helay shaqooyin, waxbsrasho iyo nolal kaduwantan tii magaaloyinka waawayn.
Magaalada Mankato oo ka mida magaalooyinka ay Somalidu dageen, ayaa waxaa lagu qabtay xaflad lagu soo bandhigayay dhaqanka Somalida iyo dhibaatooyinka ay kala kulmeen nolasha qurbaha.
xaflada waxaa loogu talagalay in dhaqanka soomaalida lagu baro bulshooyinka ay dadka soomaalidu la soo dageen ee ay dariska la noqdeen.
Hadaba, Fardawsa Jaamac oo ah qaban qaabiyaha xaflada Dhaqanka Somalida iiyo Hussein Yusuf Jaamac oo ah gudoomiyaha urur ay leeyihiin daka somaliyeed ee magaaladaasi ku nool, ayaa u waramay wariyaha BBC-da Mohamed Haji Hussein waxaanu ku horamara fardawsa oo uu waydiiyay wax yaabaha dhaqanka ay ku cabirayeern ee ay daka u soo badhigeen waxa ay yihiin